के हो ‘हिटलर’ ? कहिले देख्नेछन् दर्शकले ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
के हो ‘हिटलर’ ? कहिले देख्नेछन् दर्शकले ?
नेपाली चलचित्र ‘हिटलर’को फस्टलुक रिलिज गरिएको छ । साथमा, चलचित्रको प्रदर्शन मिति समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
यो चलचित्र आउँदो बर्षको जेठ १२ गतेबाट रिलीज हुनेछ । लभ स्टोरी तथा कमेडी जनराको यो चलचित्रमा नव–नायिका सामिया बर्तौलालाई राणा खानदानकी छोरीको रुपमा देखिनेछ ।
अष्टनारायण पिक्चर्सको प्रस्तुतीमा तयार भएको यो चलचित्रको निर्माणमा अल्टरनेट मोसन पिक्चर्स र लोचन घिमिरे इनकर्पोरेटेडको सहकार्य रहेको छ । चलचित्रमा सोहित मानन्धर, सामिया बर्तौला, मेनुका प्रधान, दिवस धिताल, ए गुरुङ लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
हिटलरमा लोचन घिमिरेको संगीत, सूर्य थोकर लामाको एक्सन, अरुणराज पौडेलको छायांकन, कृष्ण के अच्छामीको कोरियोग्राफी छ । मुगु र काठमाण्डौमा यो चलचित्रको छायांकन गरिएको छ ।
यस्तै, नायक सोहित मानन्धरले यो चलचित्रमा आफू फरक भूमिकामा देखिएको बताए । नायिका सामिया बर्तौलाले चलचित्रको कथावस्तु मन परेकाले काम गरेको बताइन् । उनले भनिन्–‘यो चलचित्रमा म राणा खानदानीकी छोरीको भूमिकामा छु । चलचित्रको अफर धेरै आएपनि मैले कथावस्तु मनपरेपछि ‘हिटलर’मा काम गरेँ ।’